SAWIRO:-Fulinta heshiiska Beelo ku dagaalamay Mudug oo bilaawday - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Fulinta heshiiska Beelo ku dagaalamay Mudug oo bilaawday
SAWIRO:-Fulinta heshiiska Beelo ku dagaalamay Mudug oo bilaawday
Deegaanka Towfiiq ee Bariga Gobolka Mudug waxaa Maanta gaarey wafdi uu hoggaaminayo Taliyaha Guutada 15-aad ee qeybta 21-aad ee ciidanka Xooga dalka Gen. Mascuud Maxamed,halkaas oo dhawaan ay ku dagaalamaeen laba maleeshiyo Beeleed.
Wafdiga taliyaha ayaa horudhac u ah Taliyaha Ciidamada lugta xoogga dalka iyo Taliyaha Qeybta 21-aad oo markale tegaya deegaankaas,si loo dhaqan geliyo heshiiskii ay wada gaareen labada Beelood.
Saraakiishaan ayaa waxaa ay dadihin doonaan sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada malkeeshiyaadka dagaalamay taas oo bilaaw u ah fulinta heshiiskii ay dhawaan wada gaareen labada Beelood.
Maantay ayaa lagu wadaa in la kala qaado ciidamadii beelihii ku dagaalamay degaanada Afbarwaaqo iyo Towfiiq, taas oo ah qodobka labaad ee hesiiskii shalay la gaaray,waxaana degan xaalada deegaannadii lagu dagaalamay.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 15-12-2019
Next articleSAWIRO:-Duqa Muqdisho oo heshiis la saxiiday dhigiisa Magaalada Dooxa
Madaxweynaha Waare oo Magacaabay Guddiga dad badan ee doorashooyinka
Madaxweynaha Somaliland,Muuse Biixi Cabdi, ayaa kulan la qaatay wufuud ka kala socotay dalka Jabuuti iyo maamulka Soomaalida Itoobiya, kuwaas oo ka qeyb-galay furitaanka tartanka...